Nhengo dzeDare reParamende Dzotoreswa Mhiko
HARARE — Nhengo dzedare reparamende neChipiri dzakatora mhiko yekutanga basa kudare reparamende muHarare.
Nhengo dzeNational Assembly kubva kuZanu-PF nezvikwata zviviri zveMDC dzakatora mhiko kunyangwe hazvo nhengo kubva kuzvikwata zveMDC dzabuda mudare VaJacob Mudenda vasati vadomwa semutauriri wedare iri kana kuti Speaker of Parliament.
Nhengo dzeMDC dzinoti dziri kunyunyuta nekudomwa kwaVaMudenda semutauriri wedare iri. Vamwe vanoti havafare kuti munguva yegukurahundi VaMudenda vaive gavhuna weMatebeleland North. Asi vamwe vanoti izvi zvinhu zvakaitika kare VaMudenda vachinja.
Nhengo idzi dzatsidza kuti chinangwa chadzo ndechekuumba mitemo inovandudza hupfumi hwenyika pamwe nekuti vanhu vave nehupenyu hwakanaka.
Amai Marble Chinomona ndivo vadomwa nemutevedzeri waVaMudenda uye vaviri ava vabva vatoreswa mhiko yebasa nemutongi mukuru wematare Chief justice Godfrey Chidyausiku.
Hapana kuitwa sarudzo sezvo pasina apikisa kudomwa kwevaviriri ava. Mumashoko avo ekutambira basa ravo, VaMudenda vati vachaita basa ravo vasina divi ravakarerekera.
Vaimbove gurukota rezvezvicherwa VaObert Mpofu vaburitsa misodzi yerufaro apo vange varikutura mashoko ekukorokotedza VaMudenda. VaMpofu vati ivo naVaMudenda vakakura vese uye vanobva kudunhu rine hurombo uye vatiwo kudomwa kwaVaMudenda kuti vatore chigaro chemutauriri wedare zvinhu zvavabata moyo.
Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, Amai Joyce Mujuru, vati zvaitika izvi zvino ratidza kuti hurumende inofanira kutarisa matunhu ese kana ichidoma vanhu kuenda pazvigaro zvepamusoro nekuita mabasa ebudiriro.
Zvichakadaro nhengo dzeNational Assembly kubva kumapato ese dzati dzichashanda pamwe mukusimudzira magarire evanhu munyika.
Mumuriri weMabvuku muNational Assembly, VaJames Maridadi veMDC-T vati tariro yavo ndeyekuti dai muparamende maitwa nhaurirano dzekuvaka nyika. Vanomirira Gokwe –Gumunyu , Amai Melania Mahiya veZanu-PF vati paramende inofanira kuvaka mitemo inoita kuti munyika muve nebudiriro.
Vanotsanangura kuti munzvimbo mavo makasarira kumashure panyaya dzebudiriro. Vanotungamira nhengo dzeZanu-PF muNational Assembly VaJoram Gumbo vati zvakakosha kuti nhengo dzedare kubva kumapato ese dzishande pamwe kuti dzihandura hupenyu hwevanhu munyika.
Vanotungamira nhengo dzeMDC-T mudare iri VaInnocent Gonese vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo bato ravo riine nhengo shoma, richaramba richimirira veruzhinji kunyange avo vari munzvimbo dzavasina kukunda.
Vatsigiri vebato reZanu-PF vange vakaungana panze peparamende vachiimba nekupurudza apo nhengo dzeparamende dzange dziri kugadzwa namabharani mukuru weparamende, VaAustin Zvoma.
Bato reZanu-PF rine nenhengo dzakawanda zvekuti rinokwanisa kuita zvarinoda mudare iri. MuHouse of Assembly Zanu-PF ine nhengo zana nemakumi mapfumbamwe nenomwe. MDC-T ine nhengo makumi manomwe, MDC-N mbiri kozotiwo pane nhengo imwe yakazvimirira.
Zvichakadai amai Edinah Madzomwe ndivo vadomwa kuti vatungamire dare seneti uye vachange vachitevedzerwa naVaChen Chimutengwende.
Zvichakadai mutungamiriri wehurumende vano tarisirwa kuvhura paramende yechisere zviri pamutemo musi wa 17 Gunyana.
Zvichakadaro, Amai Priscilla Misihairambwe Mushonga vatota mhiko senhengo yeparamende kunyangwe hazvo mubato reMDC inotungamirwa naVaWelshman Ncube maita kusawirirana vamwe vachiti havasi kufara nenyaya yekuti vakabva kuHarare vachienda kuMatebleland kuti vapihwe chigaro chinopihwa madzimai che"prortional representation."
Zvichakadaro, dare repamamende iri pamwe nedare redare remakurukota riri kutarisira kudomwa svondo rino anonzi akatarisana nematambudziko makukutu anoda kuti agadziriswe.
Vanhu vakawanda munyika vari kunonga svosve nemuromo nenzara uye kushaya mabasa. Zvipatara nezvikoro hazvina kumira zvakanaka uye migwagwa yave kupedza vanhu.
Munyikawo hamuna kuwirirana pakati pamapato ezvematongerwo enyika. Nyazvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute VaPedzisayi Ruhanya vanoti Zanu-PF iakasavandudza zvinhu inoenda kumawere.